कोरोनाको शंका लागेमा के गर्ने ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव
विश्वका २१० देशमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले अरबौं मान्छेलाई त्राहिमाम बनाएको छ ।
कसैलाई ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो वा घांटी दुख्यो भने पनि कोरोना लाग्यो कि भनेर आम नागरिक डराएको स्थिति छ । एकातर्फ लकडाउनको कारण अस्पताल जान गाह्रो छ भने अर्कोतर्फ अधिकांश निजि स्वास्थ्य संस्था बन्दप्राय छन् । सबैको आम्दानी घटेको छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा आफु सजग भएर आफ्नो उपचार आफै गर्नु राम्रो बिकल्प हो
केहि घरेलु बिधिहरु छन् जसले हामीलाई रुघाखोकी तथा कोरोना संक्रमणबाट पनि फाइदा गर्छन । कोरोना भाइरसको संक्रमणविरूद्ध सचेतना जगाउँदै आएका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले घरभित्र नै आराम गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले बिरामीका लागि घर पहिलो अस्पताल भएको भन्दै घरभित्रै रहन अपिल गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा उनले भनेका छन्, 'जसरी घर बालबालिकाको पहिलो पाठशाला हो भने हाम्रो घर बिरामीको लागि पहिलो अस्पताल हो ।'
यस्ता छन् डा. पाण्डेले दिएका सुझावहरू :
– घरभित्र आराम गर्ने । यसले रुघाखोकी निको गराउनुको साथै शरीरमा कमजोरी हुन पाउंदैन । आराम गर्ने कोठामा हावाको ओहोरदोहोर राम्रो हुनुपर्दछ । स्वाश्प्रश्वासको अभ्यास तथा प्राणायामले शरीरका अंगअंगमा प्रचुर अक्सिजन पुर्याउँछ ।
– तातोपानीले नुहाउँदा शरीरमा स्फुर्ति, ताजगी तथा बाहिरी शरीरमा रहेका किटाणुको डर हुँदैन ।
– भिटामिन सि को नियमित सेवनले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
– गुलियो, चिल्लो तथा चिसो पेय सेवन नगर्ने । हरियो सागसब्जी तथा अमिलो फलफुल सेवन गर्ने । मनतातो पानी, सुप, दाल तथा गेडागुडीका रस प्रशस्त खाने ।
– सकभर एन्टिबायोटिक नखाने । रुघाखोकी भाइरसबाट हुने हो । एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरिया मार्ने हो । द्वितीय संक्रमण नभएसम्म एन्टिबायोटिक खाँदा बेफाइदा गर्छ । लसुन, प्याज, अदुवा, बेसार तथा कागती पानी धेरै लाभदायक हुन्छ ।
– हात, खुट्टा, घांटी तथा कानमा न्यानो कपडाले छोप्ने । हातखुट्टामा तापक्रम घटेमा नाक वरिपरी रक्तसंचार घट्छ । चिसो तथा रक्तसंचार कम भएको ठाउँ भाइरसको लागि उपयुक्त ठाउँ हो ।
– नियमित घाम ताप्नाले इम्युनिटी पावर बढाउँछ । भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ । न्यानोले रुघाखोकी निको हुन्छ, जिउ दुखेको सन्चो हुन्छ अनि किटाणु मार्न सहयोग गर्दछ ।
– ज्वरो आफैमा रोग हैन । तसर्थ ज्वरो घटाउन गम्भीर बन्नुपर्दैन । हाम्रो शरीरले संक्रमणसंग लड्दा ज्वरो आउने हो । ज्वरोले जाडो भएको बेला आफुलाई न्यानो गराउनु पर्दछ । ज्वरो बढेर पसिना आएपछि तापक्रम घट्न थाल्छ । ज्वरो १०१ डिग्री से को आसपास पुग्यो भने पारासिटामोल खानुपर्दछ । १०० डिग्री से भन्दा कम तापक्रममा औषधि खानु हुँदैन ।
– रुघा लागेर नाक बन्द भएमा तातो पानी, चिया, पुदिना, अदुवा तथा बेसार, लसुन र प्याजको सुपले फाइदा हुन्छ । हल्का तातोपानीको बाफ लिंदा पनि फाइदा हुन्छ । न्याजल ड्रप वा नुन पानीको थोपा राखेर नाक खुलाउन सकिन्छ ।
– घांटी बसेमा मनतातो नुनपानीले कुल्ला गर्ने तथा भ्वाइस रेस्ट ( नबोल्ने ) गर्दा छिटो निको हुन्छ ।
– खोकी लागेमा मनतातो चियामा पुदिना वा अदुवा राखेर पिउने । हट लेमनमा मह मिसाएर पिउने । छाती न्यानो राख्ने गर्नुपर्दछ ।
– प्रोबायोटिकको सेवनले शरीरमा लाभदायक ब्याक्टेरिया वृद्धि गर्दछ ।
– मानसिक तनाब नलिने तथा आनन्द आउने गतिबिधि जस्तै गीत सुन्ने, उत्साह जगाउने स्पिच सुन्ने, आत्मबल बढाउने लेख पढ्ने गर्दा आत्मबल बढ्छ, इम्युनिटी पावर पनि बढ्छ ।
– ज्वरो धेरै बढेमा, घांटी दुखेमा, निल्न गाह्रो भएमा, घांटी अररो भएमा, कान दुखेमा, स्वर बसेमा, घ्यारघ्यार भएमा, खकार पहेंलो वा रक्तमिश्रित भएमा, खोकी बढेमा तथा गाह्रो भएमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर परिक्षण गर्नुपर्दछ ।
– रुघाखोकी लाग्दा अरुलाई नसरोस् भनेर खोक्दा, छ्युं गर्दा तथा कुराकानी गर्दा व्यक्तिगत दुरी कायम गर्नुपर्छ ।
– निको भएपनि केहि दिन पछिसम्म आराम गर्नुपर्छ ।
– धुम्रपान तथा मध्यपान पटक्कै गर्नुहुँदैन ।
– प्रशस्त फलफुल तथा सागसब्जी खानाले आबश्यक पोषण प्राप्त हुन्छ ।
– नियमित हात धुने बानीले कोरोना संक्रमण, रुघाखोकी तथा अन्य सरुवा रोग सर्नबाट बचाउँछ ।
– नियमित ब्यायाम, योग तथा ध्यान गर्नाले शारीरिक तथा मानसिक अवस्था शक्तिशाली हुन्छ ।
– बेसार, अदुवा, लसुन, कागती, मह, घ्यु, गुर्जो, तुलसी, अमलाको नियमित प्रयोग गर्नाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ ।
बिरामी भएर अस्पतालमा बस्नुभन्दा पोषिलो खाना, आराम, व्यायाम, घरेलु उपचार, योग, ध्यान, सरसफाई तथा सक्रिय जीवन बिताएर आफुलाई ठिक गर्नु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । यसको अर्थ हामी प्रकृतितर्फ फर्किनुको बिकल्प छैन ।
प्लास्टिकको बोतलबाट पानी पिउनु खतरनाक
गर्मीमा नरिवल पानी पिउनुका फाइदा
अनेकौं किसिमका समस्याबाट बच्न यी मसला लाभदायक